Ciidamo AMISOM ah oo Tababar loogu soo xiray Muqdisho – Radio Daljir
Oktoobar 31, 2017 10:06 b 0
Magaalada Muqdisho waxaa uu tababar ugu soo xirmay 13 Sarkaal oo ka mid ah Booliska AMISOM kana socda dalalka Nigeria iyo Sierra Lone,kuwaas oo iyana sii tababari doona Booliska Soomaaliyeed.
Tababarkan oo socday muddo 9 maalmood ah ayaa saraakiishan,waxaa ay ku baranayeen dhaqanka Soomaalida sidoo kalena waxaa ay baranayeen hannaanka bixinta tababarrada Booliska ee AMISOM.
Taliye ku xigeenka Booliska AMISOM, Christine Alalo,,ayaa sheegtay in Saraakiishan ay Soomaaliya u yimaadeen tababaridda Booliska Soomaaliya,sidoo kalena ay dabagal ku sameyn doonaan Saraakiisha Soomaalida ah ee ay tababaraan.
“waxaa ay tababari doonaan dhiggooda Soomaaliya,waxaa ay kala shaqeyn doonaa amniga Soomaaliya,waxaana ay la shaqeyn doonaan ilaa ay si rasmi ah ula wareegaan howsha Booliska”ayuu yiri Christine Alalo,.
Kooxda Alshabaab oo la wareegay degaan katirsan Baraawe